अनि राेकियाे चन्द्रदेव जोशीकाे कलम
अनि राेकियाे चन्द्रदेव जोशीकाे कलम 'बाबुरामकाे वचन काट्न नसक्दा मन्त्री बनेँ'
दिनेश गौतम काठमाडौं, २७ माघ
विश्वमा कसरी कम्युनिस्टको उदय भयो ? मार्क्सवाद, लेनिनवाद के हो ? अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन किन भए ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँकहाँ चुक्यो ? क्रान्ति कसरी सफल र असफल हुन्छ ? राज्यसत्ता के हो ? अब कसरी अगाडि बढ्ने ? समृद्ध र समुन्नत देश कसरी बन्छ ?
आगामी पुस्ताले कम्युनिस्टबारे राम्रोसँग बुझ्न सकून्, यसका लागि अरू किताब खोज्नै नपरोस् । एउटै किताबमा क्रान्ति समेटियोस् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्तका अध्यक्ष चन्द्रदेव जोशी कम्युनिस्ट क्रान्तिका किताब लेख्दै थिए । विश्वका क्रान्ति उनी किताबमा उतार्दै थिए, भोलिको सन्ततिका लागि ।
जीवनको उत्तरार्द्धमा पनि उनको मन–मस्तिष्क र हातका औँला कम्प्युटरमा सलबलाइरहेका थिए । पुस्तक लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । समय ठीक चलेको हुन्थ्यो भने यतिबेला उनको किताब छपाइमा पुगेको हुने थियो ।
२२ माघ बुधबार पनि उनी कम्प्युटरमै थिए । लेखन र अध्ययनमै मग्न जोशी बाहिरी दुनियाँबारे बेखर थिए । यही साता लेखनको काम सक्नु थियो उनलाई ।
मोबाइलमा घण्टी बज्यो । ‘हेलो’ पनि भन्न नपाउँदै सुने, ‘तपाईंको नाम पनि अख्तियारले अदालतमा दर्ता गराएछ नि !’
जोशी झसङ्ग भए । शरीर फुलेर भारी भयो ।
खबर सुनाउने छोरा थिए । सुरुमा त उनलाई पत्यार पनि लागेन । एकाएक सञ्चारमाध्यमबाट उनको पनि नाम आउन थाल्यो । ७ करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै आफूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको खबरले जोशी छाँगाबाट खसेझैँ भए ।
त्यो दिन उनका लागि जीवनकै कालो दिन बन्यो । उनका मन, मस्तिष्क र हातका औँला चल्नै सकेनन् ।
लेखनमा एकाएक ‘ब्रेक’ लाग्यो ।
‘जीवनमा ७ लाख त एकमुष्ट देखेको छैन, ७ करोड !’, जोशी तर्सिन्छन् ।
काठमाडौंको मध्यबानेश्वर । वरिपरि रङ्गीन गगनचुम्बी घरहरू । त्यहीबीचमा छ, फुस्स उडेको पुरानो घर । घरका रङहरू पनि बेरङ देखिएका छन् । कतै भत्किएको, कतै उप्किएको । मर्मतको प्रतीक्षामा बसेको झैँ देखिन्छ उनको घर ।
भित्री कोठमा छ पुरानो लाइब्रेरी । यत्रतत्र छरिएका किताब । पुराना फोटाहरू भित्तामा टाँगिएका छन् ।
त्यही घरको छतमा बसेर गफिए जोशी ।
मधुर घाम । हातमा छ कागज । उनले गरेका निर्णयका अंशहरू कागजमा लेखिएका छन् । वरिपरि छरिएका छन् पत्रपत्रिका । पत्रपत्रिकाका मुख्य हेडलाइन पनि उनी नै बनिरहेका छन् अचेल ।
सेतै फुलेका कपाल, मसिनो स्वर । बोल्दाबोल्दै आवाज भासिन्छ । सँगै थियो, प्लास्टिकको पुरानो कत्ला परेको कुर्सी, जुन कुर्सीको खुट्टा नै भाँचिएको थियो ।
'ओहो ! जो व्यक्ति ७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको छ, उसको घर यस्तो हुन्छ ?', मैलेसमेत आफैँले आफैँलाई प्रश्न गरेँ ।
फाइल अदालतमा पुगेको छ । अब न्यायालयले जे फैसला गर्छ, त्यो नै सर्वमान्य होला । जोशी पनि न्यायालयले न्याय दिने आसमा नै छन् ।
फाइल अदालतमा पुगेकाले जोशीले तत्काल धेरै टिकाटिप्पणी गर्न चाहेनन् ।
जीवनका आरोह अवरोहका पहाड छन् उनीसँग ।
सुदूर गाउँ दार्चुलामा जन्म
नेपालको सुदूर गाउँ दार्चुला । सीमाले नेपालमा पर्ने तर त्यहाँका नेपालीको हरेक सम्बन्ध भारतसँग जोडिन्थ्यो । नेपाली पैसा चल्दैनथ्यो । त्यहाँका नागरिक नेपाली भाषा बोल्दैनथे । कि त स्थानीय कि त हिन्दी भाषा नै चल्थ्यो त्यहाँ ।
त्यही गाउँमा जन्मिएका हुन् जोशी– ९ असार १९९५ सालमा ।
सामान्य परिवार । खान लगाउने पुग्ने जग्गा जमिन थिएन । बुबा ज्योतिष । पञ्चाङ्ग लेख्ने । ग्रह शान्ति गर्ने । त्यसबाटै परिवारको गुजारा चल्थ्यो । बुबा ज्योतिष भएकाले उनले पनि ज्योतिषबारे बुझ्ने, सिक्ने र लेख्ने मौका पाए । पढ्ने मौका पाए ।
बोल्दाबोल्दै जोशी दार्चुलाको सुदूर कुइनेटामा पुग्छन् ।
गाउँमा स्कुल थिएन । उनले बुबाबाटै लेख्न सिकेका थिए । जोशी १४ वर्षको उमेरमा भारतको पिथौरागढ गए, पढ्नका लागि । उनले सुरुमा ५ कक्षाको परीक्षा दिए । पास पनि भए । त्यसपछि गाउँमै स्कुल खुल्यो ।
गाउँमा पढाइ त हुन्थ्यो तर परीक्षा दिन भारत नै जानपथ्र्यो । पाठ्यक्रम नेपाली थिएन । भारतकै पाठ्यक्रम थियो । कहिले दार्चुला त कहिले पिथौरागढ गर्दै उनले एसएलसी पास गरे ।
उनको स्मृतिमा स्कुले जीवन अझैै कैद छ ।
रोगले थलिँदा ...
एसएलसीपछि उच्च शिक्षा पढ्ने उनको धोको थियो । उनी अझै पढ्न चाहन्थे । पढाइमा पनि तेज थिए जोशी । एसएलसीपछि पिथौरागढमै आईएस्सी पढ्ने भए ।
तर, पढ्नका लागि रोग बाधक बन्यो । उनलाई ऊबेलाको निकै डरलाग्दो अर्थात् ज्यानमारा रोग क्षयरोग अर्थात् टीबीले समात्यो ।
उनको पढाइमा अवरोध आयो । केही समय उपचारमा लागे । रोगलाई पन्छाउँदै उनले आईएस्सी उत्तीर्ण गरे ।
राम्रो अंक ल्याएर आईएस्सी उत्तीर्ण हुँदा उनी निकै खुसी भए ।
गाउँमा स्कुल नहुँदा पढ्नबाट धेरै बञ्चित थिए । सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन गाउँमा स्कुल खोल्न उनले पहल गरे । आईएस्सीपछि उनी आफ्नै गाउँमा पढाउन थाले । त्यसपछि भारत गएर पढ्नुपर्ने नेपालीको दुःखका दिनको अन्त्य भयो ।
दार्चुलाको शिक्षाका ज्योति थिए जोशी ।
२०१७–०१८ सालमा कांग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन चलाएको थियो । ओखलढुङ्गा कब्जा गरेजस्तै कांग्रेस बझाङ कब्जा गर्न पुगेको थियो । त्यसपछि दार्चुला कब्जा गर्ने कांग्रेको नीति थियो ।
कांग्रेलाई सहयोग गर्‍यो भनेर तत्कालीन सरकारले उनलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ घोषणा गर्‍यो । तत्कालीन सरकारले उनलाई मात्र होइन, उनको समग्र गाउँलाई नै अराष्ट्रिय घोषणा गर्‍यो ।
उनी पञ्चायतका विरुद्ध झनै खरो भएर प्रस्तुत भए त्यसपछि ।
गाउँलाई नै अराष्ट्रिय घोषणा गरेपछि भागाभाग भयो । कोहीलाई जेलमा हालियो । गाउँमा बस्न नसक्ने भएपछि उनले काठमाडौंका लागि बाटो तताए । पहिलो पटक २०१९ सालमा उनी काठमाडौं आए । दार्चुलाबाट हिँडेको ७ दिनको दिन उनी काठमाडौं आइपुगेको सम्झन्छन् ।
‘जिन्दगीमा कति माइल हिँड्नुपर्ने हो ?’, युवा जोस जोशीमा छचल्किन्छ, ‘बाँचुञ्जेल यात्रा जारी राख्नै छ ।’
कांग्रेस नेता बीपी कोइराला दार्चुला भ्रमणका लागि पुगेका थिए । बीपीको भ्रमणको स्वागत गर्न जोशीलाई नै अगाडि सारिएको थियो । जोशी राम्रोसँग नेपाली बोल्न नसक्ने । उनले हिन्दीमा सम्बोधन गरे । उनलाई लागेको थियो, हिन्दीमा बीपीले बुझ्दैनन् ।
जब भाषण सकिएपछि उनलाई बीपीले भने, ‘म पनि हिन्दी बुझ्छुु । राम्रो भाषण गर्‍यौ । तिमी काठमाडौं आऊ ।’
बीपी प्रधानमन्त्री भएपछि उनी काठमाडौं आए तर भेट्न सकेनन् ।
अनि कांग्रेस छाडे
२०१७ सालमा बझाङ काण्ड हुँदा ओम जंगहरू दार्चुलामा मारिए । त्यसबेलाका कांग्रेसका नेता द्वारिकादेवी ठकुरानी र शिवराज पन्तलाइ भेट्न उनी पिथौरागढ पुगे । त्यहाँ विवाद भयाे । कांग्रेसका कारण सोझा नागरिकको मृत्यु भयो । अकालमा सर्वसाधारणको ज्यान गएपछि पार्टीप्रति उनलाई वितृष्णा जाग्यो । उनी कांग्रेस राजनीतिबाट अलग्गिए ।
उनी तत्कालीन सरकारप्रति रुष्ट देखिन्छन् ।
साझा बसको कण्डक्टर, ८० रुपैयाँ तलब
दार्चुलामा बस्न नसक्ने भएपछि उनी काठमाडौं आएका थिए । अपरिचित शहर । कहाँ जाने ? के गर्ने ? के खाने ? कहाँ बस्ने ?
उनी अन्योलग्रस्त थिए ।
दार्चुलाकै चिने जानेकासँग उनी पकनाजोल बस्न थाले । त्यहीँबाट उनले साझा यातायातमा कण्डक्टरको काम गर्न थाले । जिल्लामा राम्रो प्रभाव । हाईस्कुल चलाएर बसेको । पढेलेखेको, ठूलो इज्जत भएको मान्छे ।
‘यत्रो पढेको मान्छे पनि कण्डक्टर हुने ?’, धेरैले प्रश्न गर्थे ।
काम नगरे उनको पेटले शान्ति दिँदैनथ्यो । पेटका लागि पनि उनले काम गर्नै पर्थ्यो ।
‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ भएकाले उनले अरू जागिर पाएनन् । जागिर खान त जनवर्गीय सङ्गठनमा आवद्ध हुनै पर्थ्याे । उनी कुनै सङ्गठनमा आवद्ध थिएनन् ।
साझामा काम गर्न पनि कहाँ सजिलो थियो र त्यतिबेला । कण्डक्टर हुनु १ महिना ट्रेनिङ नै लिनुपर्थ्याे । उनको त्यतिबेला ८० रुपैयाँ सुक्खा तलब थियो ।
कण्डक्टर हुँदाका दिन सम्झँदा उनी मन्द मुस्कुराउँछन् ।
त्यसपछि रुस यात्रा
साँझमा काम गर्दै अरू ठाउँमा पनि आवेदन दिन्थे तर नाम निस्कँदैनथ्यो । उनी अझै पढ्न चाहन्थे । पढ्नका लागि उनी बर्माका लागि छनोट भए । तर, बर्माको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण उनी जान पाएनन् ।
१ वर्षपछि उनले निवेदन दिए रुसका लागि । उनी छनोट भए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री तुलसी गिरी थिए । गिरीकै पालामा उनी पढ्नका लागि रुस पुगे ।
पढ्ने सपना उनको साकार हुँदै थियो तर रुस पुगेपछि फेरि पढाइमा ब्रेक लाग्यो । कारण थियो– उनको पुरानै रोग । ४ महिना उनले रुसकै अस्पतालमा बिताए ।
पढ्ने सपना बोकेर रुस पुगेका जोशी रोगले थलिए । तत्कालीन सरकारले फर्काउने कोसिस गर्‍यो । नपढी घर फर्किनुपर्ने भएकाेमा जोशी निराश भए ।
संयोगवश रुसमा उनको भेट माधव शर्मा र कमर साहसँग भयो । साह रुसमा चल्तापुर्जा रहेछन् । उनी कम्युनिस्ट सङ्गठनमा आवद्ध थिए ।
साहले जोशीकोे नेपाल आउने टिकट क्यान्सिल गरिदिए । त्यसपछि रुसमै उनको उपचार भयो । रुसको अस्पतालबाट उनले साहित्यिक जीवन सुरु गरे । हस्पिटलमै कविता लेख्न थाले । झण्डै ४ महिना अस्पताल बस्दा उनी साहित्यकार बनेर निस्किए । त्यसपछि उतै पढ्न सुरु गरे ।
शर्मा र साहले गरेको सहयोगप्रति उनी कृतज्ञ हुन्छन् ।
कांग्रेसबाट राजीनीति सुरु गरेका जोशी रुस पुगेर कम्युनिस्ट बने । रुसमा उनको भेट कम्युनिस्ट नेताहरूसँग हुन थाल्यो । कमर साहको हातबाट २०२२ सालमा मस्कोबाट उनले कम्युनिस्टको सदस्यता लिए ।
मस्कोमा जिल्ला पार्टी सञ्चालन गरे । २०२७ सालमा उनले मस्कोबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे । त्यसपछि थप मार्क्सवादको विषय पढे ।
रुसका तीता–मीठा अनुभव उनले सँगालेर राखेका छन् मस्तिष्कमा– कहिल्यै नमेटिनेगरी ।
अनि नेपाल फर्किए
मेकानिकल इन्जिनियरिङ र मार्क्सवादको अध्ययनपछि उनी नेपाल फर्किए । तर, उनले कतै काम पाएनन् । कारण थियो, कम्युनिस्ट ।
लामो कसरतपछि उनले नेसनल ट्रेडिङमा अस्थाईमा काम पाए । उनले ५ वर्ष काम गरे त्यहाँ । काम गर्दै उनले राजनीतिलाई पनि अगाडि बढाए ।
विद्यार्थी र युवाको ढुकढुकी
त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २ वटा समूहले नेतृत्व गरेको थियो– एउटा केशरजङ रायमाझी र अर्को पुष्पलाल श्रेष्ठले । उनी रायमाझी समूहमा आवद्ध भए । उनलाई पार्टीले विद्यार्थी र युवाको इन्चार्ज बनाएको थियो । २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व उनले नै गरेका थिए ।
विद्यार्थी र युवाका आशलाग्दा नेता थिए जोशी ।
२०४२ सालमा सत्याग्रह सुरु हुनुअघि नै उनी घरबाटै गिरफ्तार भए । केही समयपछि उनी छुटे ।
तर, त्यही साल ६ असारमा बम काण्ड भयो । बम बनाउने प्रमुख व्यक्ति भनेर जोशीलाई तत्कालीन सरकारले पक्राउ गर्‍यो । मस्कोमा इन्जिनियरिङ पढेर आएको बम बनाउने यही हो भनेर उनलाई पक्राउ गरेको थियो । १ वर्षसम्म हनुमानढोकामा उनलाई राखियो ।
उनी जेल पर्दा सबैले माया मारिसकेका थिए । मर्‍यो कि बाँच्यो अत्तोपत्तो थिएन । घरमा पनि सम्पर्क भएन । घरपरिवार सबै वियोगमा थिए । झण्डै ६ महिनापछि परिवारले उनी जीवितै रहेको थाहा पाए ।
त्यसपछि खुसीको त्यान्द्रो जोशीको परिवारमा पलायो ।
जेलपछि जागिर पनि खुस्कियो
१ वर्षपछि उनी जेलबाट छुटे । पार्टीकै काममा फेरि सक्रिए भए । त्यतिबेला उनी केन्द्रीय कमिटीमा पुगेका थिए तर उनको जागिर छुटिसकेको थियो ।
प्राइभेटमा काम गर्दै जीवन चलाउँदै राजनीतिमै होमिए । उनी २०४२ सालमा पार्टीको पोपिलटब्यूरो सदस्य भए । २०६४ सालमा उनी पार्टीको अध्यक्ष बने ।
लामो राजनीतिक सङ्घर्षको लामो सास फेर्छन् जोशी र केही बेर मौन बस्छन् ।
२०६२/०६३ को आन्दोलनका अगुवा
देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन आवश्यक थियो । जनताले अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने उनमा थियो । अधिकारका लागि सशस्त्र विद्रोह होइन, गाउँघर घेरेर होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट नै जनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने उनको पार्टीको मान्यता थियो ।
त्यसैले माओवादी, एमालेसँगै उनको वैचारिक मत भिन्नता थियो । त्यसैले नेकपा संयुक्तले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
झापा आन्दोलन भयो । त्यस बखत नागरिकको ज्यान गयो । नागरिरको ज्यान जानु हुँदैन भन्ने उनको पार्टीको ठहर थियो । त्यसैले एमालेसँग उनीहरूको मतभिन्नता थियो । २०४६ पछि एमाले पनि शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आयो ।
तर, अर्को समूह माओवादी जंगल पस्यो । हिंसात्मक विद्रोहको विपक्षमा उनको पार्टी थियो । तत्कालीन राजाको शासनले फेरि कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबैलाई २०६२/०६३ को आन्दोलनमार्फत एकै ठाउँमा ल्यायो ।
वाम मोर्चाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै जोशी शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अग्र मोर्चामा देखिन्थे ।
जोशी निस्ठावान् कम्युनिस्ट नेताको भाव दर्शाउँछन् ।
‘अहिलेका कम्युनिस्ट नेकपा संयुक्तकै लाइनमा हिँडेका छन्’, जोशी भन्छन् ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी पनि होमिए । पहिले संविधानसभाको निर्वाचनमा उनको पार्टीले पनि केही सिट ल्यायो । जनताको अधिकार स्थापित गर्न उनी पनि संविधानसभा सदस्य बने ।
तर, उनलाई कहिल्यै मन्त्री बन्ने इच्छा थिएन । उनले पार्टीको तर्फबाट अरूलाई नै मन्त्री बनाउँथे तर आफू सहभागी भएनन् ।
बाबुरामको वचन काट्न नसक्दा...
जनताले चुनेका प्रतिनिधिले नै संविधान लेख्न पाउनु भाग्यको कुरा थियो । तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले उनलाई सरकारमा आउन र मन्त्री बन्न पटकपटक आग्रह गरे । तर, उनले आलटाल गर्दै आएका थिए ।
यसअघि उनले पार्टीका अरू नेतालाई नै मन्त्री बनाएका थिए । यस पटक संविधानमा पार्टी अध्यक्षले नै हस्ताक्षर गर्ने भनेर उनलाई पार्टीले सरकारमा पठायो । तथापि, उनको इच्छा मन्त्री बन्ने थिएन रे !
संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने अभिलासाले उनी सरकारमा सहभागी भए । ३ जेठ २०६९ मा उनी भूमिसुधारमन्त्रीमा नियुक्त भए । लामो राजनीतिक सङ्घर्षपछि पहिलो पटक उनी मन्त्री बने । तर, १४ जेठमै पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । उनले ३ असोजमा मन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।
यी विगत सुनाउँदै लामो सुस्केरा हाल्छन् जोशी ।
उनी १ सय २० दिन मन्त्री पदमा रहे तर ८०–९० दिनभन्दा बढी उनले काम गर्न पाएनन् । देशमा आआफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन चलिरहेकाले मन्त्री भएको एक साता त उनी घरमै बसे । पछि स्कर्टिङ गरेर उनलाई पदबहाली गराइएको थियो ।
उनका लागि मन्त्री पद अभिशाप बन्यो ।
मन्त्री हुँदा आएको दबाब र उनले नगरेका महत्त्वपूर्ण निर्णय
जोशी मन्त्री हुनेबित्तिकै विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्न दिने निर्णय गर्न दबाब आयो । कति आए, कति गए यो प्रस्ताव लिएर तर उनले सिधै अस्वीकार गरे ।
‘विदेशीलाई नेपाली भूमि अखडा बनाउन दिनु हुन्न भनेर अपार्टमेन्ट किन्न दिने प्रस्तावलाई मैले मान्दै मानिनँ’, उनी भन्छन्, ‘प्रस्ताव ल्याउने कति थिए कति, अहिले ती सम्झनामा पनि छैनन् ।’
धादिङको वायु देवताको गुठीको जग्गा रहेछ । तत्कालीन माओवादीका नेताले ‘जसले कमाएको छ, उसैको नाममा गर्दिनुपर्‍यो’ भनेर आए तर उनले त्यो पनि मानेनन् ।
‘माओवादीकै नेता, कार्यकर्ताले कमाएको जग्गा रहेछ’, जोशी भन्छन्, ‘माओवादीका ठूलै नेता आए, जसले कमाएको हो उसैको नाममा लालपूर्जा दिनुपर्‍याे भनेर तर मैले अस्वीकार गरेँ ।'
जोशीलाई बालाजु सडकको पनि कुरा आएको थियो तर उनले त्यो पनि निर्णय गरेनन् ।
माओवादीले जनयुद्धमा खोसेको जग्गाको लालपुर्जा बनाइदिन उनीकहाँ ठूलै नेता आइपुग्थे तर उनले नियमविपरीत कुनै पनि फाइल अगाडि बढाएनन् ।
‘सर्लाहीमा कब्जा गरेको जग्गा माओवादी कामरेडको हो । कामरेडको नाममा बनाउनुपर्‍यो भनेर प्रस्ताव आयो’, जोशी भन्छन्, ‘स्वर्गद्वारीको सयौँ रोपनी गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने भने तर ती सबै रोकेँ । मैले अगाडि बढाउन दिइनँ ।’
त्यहीबीचमा आएको फाइल हो– ललिता निवासकाे जग्गाकाे । ‘३ रोपनी १२ आना जग्गाको फाइल थियो’, उनी भन्छन्, ‘त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा होइन, टिकिन्छा गुठीको नाममा बनाउनुपर्ने थियो । त्यसको इतिहास पनि मलाई थाहा छैन ।’
अदालतले कार्यान्वन गर्नू भनेको फाइललाई आफूले सदर गरेको जोशी बताउँछन् ।
‘को मोही थिए ? के थियो ? केही थाहा छैन । सरकारी जग्गा हो । गुठीको नाममा लगेको हो । व्यक्तिलाई दिने पनि होइन । सर्वोच्चको परमादेश थियो । त्यसलाई सदर गरेको मात्र हुँ । मैले मन्त्रीबाट नै राजीनामा दिएँ । त्यसपछि के भयो थाहा छैन’, जोशी भन्छन्, ‘अख्तियारले मेरोसमेत नाम राखेर मुद्दा हालेपछि सबै थाहा पाउँदै छु । नखाएको विष लागेको छ ।’
मन्त्री हुँदा चौतर्फी दबाब आएकाले नै उनले १ सय २० दिनमै राजीनामा दिएका हुन् ।
‘मन्त्री भएर बस्दा गिजगिज भयो । सरकार सञ्चालनमा केही मिलेन । त्यहाँभित्रको जालो बुझ्न नसकेपछि मन्त्री पद छाडेको हुँ’, उनी भन्छन् ।
आज ७ करोड रुपैयाँको विगो छ उनीमाथि । मन्त्री हुँदासमेत गाडी थिएन उनको । मन्त्रीबाट उनले राजीनामा दिएपनि स्वीकृत भएको थिएन । गार्डहरुसँगै थिए । ट्याम्पो नै चढ्थे । ‘गार्डले हतियार बोकेर ट्याम्पोमा हिँड्न गाह्रो भयो भन्थे’, जोशी निराश हुन्छन् ।
केही समयअघि अख्तियारले सोधपुछका लागि बोलायो उनलाई ।
‘अख्तियारले केही समयअघि बोलाएको थियो । आफैँ गएर आफ्नो कुरा राखेर आएको थिएँ । आज मुद्दा पर्दा विचित्र लाग्यो’, जोशी लामो खुई काड्छन् ।
सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा बिताएँ । किताबसँग बिताएँ तर अबको जीवन कहाँ बिताउनुपर्ने हो ? उनैलाई थाहा छैन ।
८२ वर्षीय जोशी निःशब्द हुन्छन् ।
तर, अदालतले न्याय दिने कुरामा उनी आशावादी भने छन् ।
‘अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यही नै हो । मैले एक रुपैयाँ पनि खाएको छैन । अदालतले न्याय गर्ला भन्ने आशा छ’, जोशी अवाक् हुन्छन् ।
चित्रगुप्तले जन्मँदा भाग्य लेखे तर जीवनको अन्त्य अदालतले गर्ने हो भन्ने पनि उनमा छ । ‘मसँग मुद्दा लड्ने महँगो वकिल राख्ने क्षमता पनि छैन’, न्यायको आस गर्छन् जोशी, ‘अदालतले जे गर्छ, त्यही मान्नुको विकल्प छैन ।’
किरण प्रकाश हो । प्रकाश जीवन हो । जीवन सङ्घर्ष हो । यसरी नै चलेको छ जीवन भन्ने लाग्छ जोशीलाई । ‘अन्त्यसस्म हिँड्दै जानुपर्छ’, यद्यपि, साहित्यकारसमेत रहेका जोशी जीवनलाई सरल रूपमा लिन्छन् ।
‘काम गर्दै जाऊ, पछाडि नहेर’, उनलाई बुबाले भनेका थिए, ‘नाम कमाइस् छोरा । इज्जतमा दाग नलगाउनू ।’
तर, आज भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ उनीमाथि । ‘भोलि अदालतबाट सफाइ पाइयो भने पनि जनताको मनबाट यो दाग मेटिएला त ?’, जोशीलाई चिन्ता छ ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ २७, २०७६, ०५:०५:००
#बालुवाटार जग्गा प्रकरण #चन्द्रदेव जोशी
सरकार ! घर जान दिने कि सडकमै मरौँ ?
दिनेश गौतम @DNepaliG
अनलाइनबाटै पढाउँदै छन् केयूका प्राध्यापक
दिनभर सुनसान, साँझमा चहलपहल
महावीर पुनले बनाएको पीपीई डाक्टरले भोलि पाउने